Maxaa ka jira in Real Madrid iyo Barcelona ay doonayaan saxiixa Kevin De Bruyne? Wakiilkiisa ayaa ka hadlay – Gool FM
Maxaa ka jira in Real Madrid iyo Barcelona ay doonayaan saxiixa Kevin De Bruyne? Wakiilkiisa ayaa ka hadlay
(Manchester) 14 Feb 2018 Wakiilka laacibka kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne ayaa ka hadlay xiisaha uga imaanaya kooxaha Real Madrid iyo Barcelona.
Wakiilka Kevin De Bruyne ayaa xaqiijiyay inuu jiray xiriir laacibka uga imaanayay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ka hor intii uusan u saxiixin heshiiska cusub kooxdiisa City bishii Janaayo.
“Real Madrid iyo Barcelona? Xiriir aan rasmi ahayn ayaa uga imaanayay wakiilada kooxahaas, xiriirkooduna waa mid sii jiraya haddiiba ay doonayaan saxiixiisa mustaqbalka, laakiin haatan ma jiraan wax la sheegi karo” ayuu yiri wakiilka Kevin De Bruyne.
“Haatan Kevin wuxuu doonayaa inuu sii joogo Manchester City, aad ayuu ugu faraxsanyahay inuu u saxiixo heshiis cusub iyo habka shaqada ee tababare Pep, laakiin ma jiro qof og wixii dhici doona mustaqbalka, sidaas darteed wax walba waa suurogal”.
Kevin De Bruyne ayaa u saxiixay Man City bishii Janaayo heshiis gaaraya ilaa 2023, waana heshiiskii labaad ee uu u saxiixo kooxdiisa City tan iyo 2015 markaas oo uu ka soo dhaqaaqay Wolfsburg.
"Waxaan u qalanay inaan garaacno Juventus" - Mauricio Pochettino
''Faa'iidada kaliya ee ay Juve lugta dambe haysato waa in aysan London Yurub ''ahayn'' - Juve oo looga jeexjeexay baraha bulshada + Qoraallo & Sawirro